कान्तिपुर गाथा : भ्यालेन्टाइन किसको सोसल रियाक्सन
13th February 2017 | २ फागुन २०७३
ब्रेकफाष्ट टेबलमा पापा कनिकालाई मास्क नलगाई शहरको कुनैपनि भागमा नजाने सल्लाह दिंदै थिए, ‘हिजो राति तिमी खूब खोक्दै थियौ। शहरमा उडेको धूलोको कमाल हो यो। स्कूटी चढनु पनि खतरनाक भएको छ। त्यसको सट्टा कार चढे हुन्छ। घरमा स्पेयर कार छँदैछ। के भो र?'
पापाको सल्लाहमा मामुले थपी हालिन, ‘खै, म त केही बुझ्दिन। खाली दौडिन पाए पुग्छ। आफनो शरीरको त मतलवै छैन। आजकालका केटाकेटीहरु किन जंगली जस्ता भएका होलान।'
कनिका केही बोलिन। उ ब्रेडमा जाम दल्दै थिइ। भनी, ‘मामु, कफी प्लिज।'
मामुले कपमा कफी हालिन। अर्ग्यानिक कफीको बास्ना डाइनिंगभरी फैलियो। कनिकातिर कफी राखेर बोलिन, ‘कति कफी कफी भन्छे। आफूलाई त एक कप कफी बढी खायो कि रातभरी निद्रा पर्दैन। यिनीहरु कति तान्छन् यो कालो कफी। हे भगवान।'
कनिका आफना पिता–माताको सरल व्यक्तित्वबाट प्रभावित थिइ। उसलाई, सुदिप्तीलाई र अफिसका केही मित्रहरुलाई मात्र थाहा थियो कनिकालाई लागेको पेरेन्नियल कफको कथा। उनीहरु सबै उस्तै थिए। मार्लवोरो रेड नतानेसम्म जाँगर नै नचल्ने। पापा–मामुलाई झुक्याउन कनिकालाई कसले भेटनु र? दुई ग्लास रम पन्च अथवा दुई पेग व्हिस्की पिएको बेलामा ऊ घरै जान्छे। अलिक बढी भयो भने मात्र साथीकहाँ सुत्ने हो। चार्लीसँगको ब्रेकअपपछि कनिकाका इन्टिमेट फ्रेन्डसहरु छैनन्। त्यसैले यो वर्षको भ्यालेन्टिन डे पनि छैन। हेलो–हाई सबैसँग छ। चार्लीसँग जस्तो आत्मीयता कसैसँग पनि छैन। उसका प्रायः साँझहरु सुदिप्तीसँग बित्दछन्। दुवै आफना प्रेमीबाट ठगिएका दुःखी आत्माहरु। कोबाट को ठगिएको हो? यसको निर्क्योल हुँदैगर्ला। कनिकाले आफू चार्लीबाट ठगिएको महसूस गरेकी छैन। मन त दुःखेको छ। त्यो साँच्चै हो। उसलाई यो राम्ररी थाहा छ चार्ली उसको दुःखेको मनमा मलहम लगाउन आउने छैन।
कनिका पापासँगै निस्किइ अफिसतिर। बिहान नौ बजे फर्ष्ट हाफको एडिटोरियल कोअर्डिनेशनको जिम्मा उसैको थियो। उसले त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्नैपर्ने थियो। फर्ष्ट हाफको स्लगका आधारमा सेकेण्ड हाफको कामको रुपरेखा बन्ने गरेको थियो। कनिकालाई उसको अफिस अगाडि ओरालेर उसको पापा आफनो अफिसतिर लागे। कनिका डबल स्टेपलिंदै आफनो कार्यकक्षमा पुगी। उ अलिकति लेट भएकी थिए। ‘गुड मर्निंग एभ्री बडी, सरी आइ एम लेट,' बोल्दाबोल्दै ऊ कुर्सीमा बसी सकेकी थिइ।
प्रिन्टोले पहिलो एजेण्डा प्रस्तुत गर्‍यो, भ्यालेन्टाइन स्पेशलको। उसले युवक–युवतीहरुको मूड अनुसार हुनेगरी प्याकेज बनाएको थियो। सिम्प्ली फन्नी प्याकेज। जिनिताको प्याकेज पनि लगभग त्यस्तै थियो। कनिकालाई थाहा थियो प्रिन्टो र जिनिताको विशेष सम्वन्ध। ऊ मनमनै हाँसी। त्यसपछि ज–जसले एजेण्डा बुझाए ती सबैको एजेण्डा भ्यालेन्टिनमा मात्र केन्द्रित थियो। कनिकाले भनी, ‘सबै प्याकेज राम्रो छ। अब स्टोरी कसले कति रोचक बनाउँछ कुरा त्यति मात्रै हो। अनि, संसार भनेको भ्यालेन्टिन मात्रै त होइन होला। देश क्राइसिसमा छ भनेको सुनिन्छ।
वातावरण विनासका हिसाबले देश क्राइसिसमा भएको चेतना सबैलाई छ। अहिलेको अर्को ठूलो क्राइसिस भनेको पुलिस चीफको नियुक्ति हो। यो क्राइसिसले संविधानका अन्य समस्याहरुलाई ठेगान लगाइ दिएको छ। पुलिसको स्टोरीमा मानिसको चाख सबभन्दा वढी छ। हामीले त्यसलाई कभर गर्नै पर्दछ। लाष्ट टाइम पुलिसको स्टोरी जिनितले गरेकी थिइ। सी इज दि बेष्ट पर्सन टू ह्याण्डिल...'
कनिका इस्सूजहरु सेटल गर्दै थिइ। टपिक्सको कुनै दुःख थिएन। मेलम्चीदेखि कावेलीसम्म। कतै कामदारका कथा कतै मालिकका व्यथा।
बल्लबल्ल कान्तिपुर शहरले अँध्यारोबाट मुक्ति पाउनै लागेको थियो उज्यालोको ताप र राप नै छोपिनेगरी धूलो उडन थाल्यो शहरमा। यसबाट मानिसको पूरै जीवन प्रभावित भयो। मास्क नलगाएका भ्यालेन्टिन जोडीले गर्ने चुम्बनपनि प्रदूषित हुने डर भयो। कनिकाको दिमागमा तीर
चल्यो, ‘अहिलेको वातावरणमा भ्यालेन्टिनहरुको किसले कतै दाँत, जिव्रो र घाँटीका सरुवा रोग त हुँदैनन?' उसले यो विषयमा सोसल रियाक्सन लिन प्रिन्टोलाई अराइ। उसले भन्यो, ‘लौ कनिदी, दिस इज भेरी डेलिकेट...'
प्रिन्टोको वाक्य पूरा हुन नपाउँदै कनिकाले जवाफ दिइ, ‘स्टोरी डेलिकेट भएर त तिमीलाई दिएको। स्टोरीका लागि जाँदा टाउकोमा घाउ–चोट लाग्यो भने कम्पनीबाट कम्पेन्सेसन दिलाउने काम मेरो...'
मिटिंग वाज अलमोष्ट ओभर। त्यही वेला सुदिप्ती रुममा पसी। उसको सम्मानमा सवै उठे। उसले आफनो व्यागबाट स्वीस चकलेटको प्याकेट निकालेर सबैलाई वाँडी। त्यसपछि मायालु पारामा भनी, ‘यू पिपल आर माइ भ्यालेन्टिन। भ्यालेन्टिन इज सिम्वोल अफ लभ...'
यो सिरिजका अन्य गाथा